Iibinta ee sawiro ee internetka - Heli Lacagta Online waxay — Photo-Sales.com
Iibinta ee sawiro ee internetka – Heli Lacagta Online waxay
Liiska bangiyada sawir
Shutterstock (Waayo, iibsada of photos)
Maanta waxaan jeclaan lahaa in aan ka hadlo qaababka lacag samaynta online by iibiyaan sawirrada sawir kaydka.
Bangiyada Photo waa website kaas oo sawir badan iibiyaan sawirrada iyaga u gaar ah.
Sawirqaade soo bandhigaysaa shaqada si macaamiisha. Macaamiisha wuxuu ka dheregsan yahay oo dhan waafaqsan:
– Waa hagaag, wax walba oo u muuqata in ay aqbalay!
– Heer sare, bixiso $ 100.
Customer, siinta lacag, “Waxaan rajeynayaa haddii markaa u baahan tahay in la safeeyey, waxaa suurtagal ah inuu kula hadlo? Ma ahan wax badan in mar sameeyey iyo illowday? ”
– Dabcan, iyada oo ku xiran waxa iyo sida in la saxo.
– Dabcan! Ma dhihi doonaa, “Aan bedeli wax walba!”
– Dhibaato No. Dhacdo ahaan, xilligan oo kale. Waxaan markaas haddii aan si lama filaan ah ay maamulaan doonaa out of lacag ama wax qorshe cusub oo ay ku weydiiso in aad bixiso wax yar oo ku saabsan lacagta? Waa Fudud, waxaan u baahan tahay aad u dhif ah, waxaan u malaynayaa in aadan wax ka qabin.
– Ma waxaad ka welwelin! Ma doonayo inaan idiin timid in la yidhaahdo, “mar kale Bixi!” 😉
Waad sheegi kartaa in aysan u dhicin.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa suuragal ah in si joogta ah iibiso sawirrada iyo hesho lacag iyaga mar kale muddo aan xad lahayn.
Ujeedada this website u gaar ah – photobank, si ka saxsan, microstock.
Tani waa ururinta weyn ee images ilaaliyo copyright.
Marka ay asaasiga ah, dhex-dhexaadin ah oo u dhexeeya dadka iibsada iyo sawir sawiro. Dhexdoodana qoraayada iyo dadka iibsada ee qalabka kale.
Buyers photos yihiin tafatirayaasha, milkiilayaasha site, samaynta, kuwaas oo u baahan sawiro.
Isticmaalka dadka kale ee photos internetka oo halis ku ah inay talaabo sharci ah lagu mutaysan karo jebinta copyright. Waa inaad sidoo kale ka iibsan xaq u leeyihiin inay isticmaalaan photos ama kiraystaan ​​sawirqaade, ama naftaada sawir.
Waxay umuuqataa in dhib badan? Marka uu qof u baahan yahay sawirka, inta badan qabaa in ay tahay ku filan si ay u iibsadaan camera ah oo ay sawiro la doonayo.
Haddii aad soo iibsatay iyo biibiilaha, ka dibna aad leedahay iyo biibiilaha ah. Haddii aad soo iibsatay kamarad, aad – masawirka
First of dhan, sababta iibsan kamarad iyo qalab kale oo loogu talagalay darbooyin tuurtuurayay? Xitaa aawadood oo ah tobaneeyo yar ama boqolaal sawiro.
Marka labaad, u sameeyo sawir wanaagsan, ma qof walba awoodo.
Isku dayga in Wehbe naftaada toogtaan qof yidhi,:
– Waxaan qaribi kara kasta farta mid!
– Waa inaad sayid ah ee karateega?
– Waxaan ahay sawir qaade! : D
Waxaad ijaaran kartaa sawirqaade, xirfad u lacag badan iyo natiijada aan arkayn uu ka hor.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa raqiisan inaad gadato hay’adda sawir ayaa dhowr doolar oo le’eg iyaga xulashada ka malaayiin photos tayo sare leh.
Dakhliga sawir Sare ee sale ee photos suuragal ka dhigay by xaqiiqada ah in sawir kasta la celcelis ah oo aan xad lahayn iibin karaa.
Bangiyada Photo ku fuliyo hawlahan soo socda:
Sale ee photos. Dhamaan sawirada waxa loo qeybiyaa on Cinwaanadaan maado. Sawir walba waa socotaa sifaha iyo liiska keywords. Photobanks dhisay-in search engine ee wax ka goobidda photos ku salaysan keywords. Waxaa jira habka biilka ah ee qaata lacagta ka soo iibsada iyo sawirada ee lacagta sawir.
Sale of videos, sawiro, image dulinka, flash-clips, cajalad la duubay.
Dakhliga Online ee sawir qaadayaasha, fanaaniinta, kuwa sawira, filim qaadayaasha iyo kuwa kale.
Protection of copyright for photos iyo qalab kale oo xuquuqdiisa.
Xaqiijinta xagga sharciga ah ee adeegsiga iibsada images.
Search images sidoo kale in
naqshadaha images background sawiro soo jeeda qurux badan rinjiyeynta beauty rinjiyeynta buluug images dhismaha sawiro midabka clipart Crimean sawir dhaqanka sawir maalintii sawiro deegaanka images yurub HD caanka ah wallpaper HD kaynta sawir beerta HD cagaaran wallpapers kur sawir taariikhda tahay guri sawir muuqaalka sawiro caleen sawir buurta PIC dabiiciga ah dabeecadda jir sawir dibadda sawir bannaan images HD park images HD warshad images dhirta wallpaper dhagaxayga weyn sawiro goobta sawir badda wallpaper HD xilli samada sawir dhagax wallpaper xagaaga images HD dalxiiska wallpaper HD munaaraddii wallpapers nabdaysan wallpaper HD safarka wallpaper HD geed clipart view wallpaper biyaha wallpaper
Sharciyada Murphy ee sawir qaadayaasha
ii soo xiriir
© Copyright 24th of June 2019 07:52:40 All rights reserved Photo-Sales.com.